Ukuhlaziywa: uMcrosoft SafeGuard Isiphequluli se-iPad
I-iPhone ne-iPod Iingcebiso kunye namacebo
Xa ndiyinkwenkwe, uMcGruff inyoka yokulwa nenja yayiyinto enhle kakhulu. Wayethelevishini kwaye ngezinye izihlandlo wayenza ukubonakala kwimicimbi yendawo (okanye ubuncinane umntu ogqoke iingubo zakhe). Ndiyakhumbula isigama esithi "Thatha ulwaphulo-mthetho". Ndandisoloko ndibuza ukuba ngubani oza kuphumelela kwimfazwe phakathi kukaMcGruff inja yecalaphu kunye neSmokey ibhere.
UMcGruff wayeyekile i-radar yam kude ndide ndibone uhlelo lokusebenza lwe-McGruff SafeGuard Browser kwi-iTunes App Store. Ndacinga ukuba le ngcamango yayingummangaliso omkhulu. Ndisoloko ndifuna ukukwazi ukucoca umxholo ongafanelekanga xa abantwana bam basebenzisa i-iPad. McGruff I-SafeGuard Isikhangeli sisisicelo samahhala, ngoko ndagqiba ekubeni ndinike i-whirl.
Emva kokuba ufake ifowuni, kufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuba uvumele abantwana bakho basebenzise. Kufuneka unikeze idilesi yakho ye-imeyile, usethe iphasiwedi yokulawula yabazali , kwaye ufake ixabiso lobudala bomntwana oya kulusebenzisa, mhlawumbi ukuseka ukuhlunga okufanelekileyo kwexesha.
Uyakufuna kwakhona ukulawula ulawulo lwabazali kwi-iPad yakho (ukusuka kwisithonjana sesethingi) ukwenzela ukuba abantwana bakho bangakwazi ukukhupha isiphequluli ngokusebenzisa esinye isiphequluli esifana nesiphequluli se-Safari esakhelwe kwi-iPad. Indlela efanelekileyo yokwenza oku kukukhupha i-Safari kwiindawo zokumisela izithintelo kwaye ucime "Ukufaka iiNkqubo" kwakhona. Uya kufuna kwakhona ukususa naziphi na ezinye iiphequluli ze-3 kwi-iPad yakho.
Emva kokusekwa kuqedile, uhanjiswa ngekhasi lokukhangela langokwezifiso lweGoogle elibonakala lihlunga izixhumanisi zokukhusela umxholo ongafanelekanga. Umntwana wakho naye unokuya kwibhar ye URL phezulu kwesikrini kwaye angene ngesandla kwidilesi yewebhu ukuba bafuna. Ndangena kwiGoogle kwaye ndathathwa kwikhasi lokuqala lasekhaya le-Google.
Ndagqiba ekubeni ndikhabe amathayi kwaye ndicofa kwiimifanekiso zethebhu kwikhasi lasekhaya laseGoogle. Ndiyifakile kwikota yokukhangela ukuba nayiphi na i-red-blooded, i-hormone ezaliswe yinkwenkwe eneminyaka engama-13 ubudala inokuzama kwaye ikwabelwa iziphumo eziye zazingalunganga.
Ndizame ukuthayipha kwii-URL zamasayithi amakhulu abantu abaziwayo kunye nesiphequluli sikaMcGruff andivumele ukuba ndivakashele nayiphi na isayithi ezama.
Enye yeempawu ezikhupha isiphequluli kukukwazi ukubeka esweni oko umntwana wakho akwenzayo kwi-intanethi. Indawo yokuqala ndiyihlolisise yithebhu yomlando . Ngelishwa, kubonakala ngathi i-glitch kunye neprogram kuba ayizange ibonise nayiphi na imbali kum nangona ndandisebenzisa isiphequluli imizuzu emininzi. Kwakukho omnye ummandla kwiqela elilawulayo lokukhusela abazali elikhuselekileyo eliphethe igama elithi "log log" kodwa ukhetho lubuhlungu kakhulu kwaye lukhuni ukuluqonda. Kubonakala kubhekiswe ngakumbi kumqhubi onokuphuhlisa inkqubo ngokuphathelele umzali ezama ukufumana apho umntwana wabo uzama ukutyelela kwiwebhu.
Ekugqibeleni ndakwazi ukubona iziphi iziza ezivaliwe ngokutyelela "Vumela indawo". Nangona ingenakho inembile, okwenziwe yanikezela ubuncinci uluhlu lwezayithi ezivaliwe zizihlungi. Ngelixa libonise iindawo ezivaliweyo, ayizange ibonise iindawo eziye zahanjelwa ngempumelelo, kwaye akuzange zinike ithuba lokukhusela isayithi elithile elingaye lawela kwiifayile.
Uhlelo lokusebenza lwe-McGruff luchaza ukuba luyakuthumela isishwankathelo somsebenzi wakho we-inthanethi (okanye ukungasebenzi) ngalunye usuku. Ndifumene i-imeyile evela kuMcGruff, nangona kunjalo, ayizange inikezele ngokucacileyo, yathetha kuphela ukuba i-X inombolo yeziza zahanjelwa kwaye i-X yenani lamasayithi lalivinjiwe. Njengomzali, ndifuna ezinye iinkcukacha. Ziziphi iiwebhusayithi ezivaliwe? Ziziphi iisayithi abaya kuzo? Ezi zinto zizinto ezibalulekileyo abazali abafuna ukuzazi.
Enye into eyandikhathazayo kukuba, ngelixa le nto ixhaswa nge-app ekhutshwe ngu-ad nge-in-app purchase ukuvula iintengiso kwi-99 cents, iintengiso kwi-version ye-mahala ayifanelekanga. Umntwana wam wayefumana iintengiso kumenzi weemoto, i-inshorensi kunye nayo yonke imicimbi yezinye izinto ezazingenakudala. Ukuba uza kuba neentengiso, ubuncinci bengaye kwiqela elidala eliza kusebenzisa umkhangeli.
Uhlelo lokusebenza ngokwalo lubuqhetseba obumjikeleze emaphethelweni kwaye lube nolune "1.0" kakhulu kwiinto zalo nangona i-2.4 ingu-moniker. Ndineempawu ezimbalwa zokujikeleza kwesikrini apho ndiza kunqakraza into kwaye iskrini siza kujikeleza ukusuka kwimihlaba ukuya kwiifoto nakuba ndingazange ndiqhube i-iPad.
Zonke iziphene zecala, i-app ikhululekile kwaye ingumxholo omkhulu. Ukucoca yonke into embi ephuma kwinetha ngumngeni onzima wokuthetha okungenani. Abantu baseMcGruff bafanele batyunjwe ngokuzama. Ukuba bayakwazi ukwenza ezinye iikinks kwi-update yangoku kwaye ndicinga ukuba le app inokukwazi ukuba sisixhobo esikhulu sokunceda abazali bakhusele abantwana babo kwi-crap e-intanethi.
McGruff SafeGuard Isiphequluli siyafumaneka kwi-Free kwi-iTunes App Store.
I-iTunes ye-Best iTunes i-Replacements ye-iPhone
Zikhusele kwi-iPhone iWindows Lock Simahla
IVault App ye-iPhone / iPod Touch
12 Iimpawu ze-iPhone ezesabekayo, ezincinci ezaziwayo
8 Iimfihlakalo ze-iPhone zexesha-xesha kufuneka Ukwazi
Indlela Yokuxelela Ukuba Umntu Wakuvimbele Kwi-iPhone
Khubaza "Layisha Izithombe ezikude" kwiDiskhi yakho ye-iOS ukwenzela ukusheshisa izinto
Iingcebiso ezingama-30 zokwandisa ubomi beBattery Life
Yenza i-iPhone Imeyili Khangela iMeyili entsha Ixesha elingaphantsi okanye Ungalokothi
Ukwahluke phakathi kwe "bonisi: akukho" kwaye "ukubonakala: kufihlwe" kwiCSS
Yintoni ifayile ye-TBZ?
Indlela yokuMela umyalezo ongafundiwe kwi-Facebook
Iyiphi i-QR Code?
Yintoni iFayile yeWMA?
Ithempeli Iya ku-2 Iingcebiso kunye ne-Powerups
Ukusekwa kwe-BIOS Ufikeleleko lweeNdawo zokuFikelela koNcedo lwaBenzi abakhulu beBIOS
Idijithali yeDiskithodi yeDithamari: Ziziphi izibini?
Yintoni i-BHO (Isixhobo soMncedisi weSiphequluli)?
ErAce v1.0 Ukuhlaziywa
Iingcebiso ezi-7 zoNxibelelwano olungcono kunye neeKlayenti zeeWeb Design
Incwadi 'Em Dano: iindlela ezintathu zokuboleka iincwadi ngefowuni yesixhobo
Indlela yokubika i-Defari Defects ku-Apple
Imiba ebalulekileyo Yonke iRaverter Hosting kufuneka icinge
Iyiphi iApplet Panel yokuLawula?
Gateway One ZX6971-UR31P I-23-intshi ye-In-One eyodwa kwi-Desktop PC
I-Marantz ibonisa iNR1607 I-Receiver yasekhaya ye-Slim-Profile
Indlela yokubuyisela iProfayili ye-Thunderbird ye-Mozilla kwi-Copy Copy
Yintoni iFayile ye-ASF?
I-Metal Gear I-V solid: I-Phantom Pain Review (XONE)